Soo dejisan Mailbird 2.8.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Mailbird
Mailbird – email macmiil awood badan oo leh awood ay ku la xisaab-duwan oo isku mar shaqeeyaan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto mail si deg deg ah, edit iyo diro. Mailbird taageertaa codsiyo badan oo wadaagi karaan faylasha ee DropBox, chat saaxiibada Facebook, la shaqeeyaan Google Drive, abuuraan notes ee Evernote iwm software ayaa si toos ah dhawaaqo markii aad hesho fariin cusub. Mailbird kooban ah tuuryo gacanta raaxo badan macmiilka.
Xoogbadane haboon macmiilka email
Awoodda leh cinwaano dhowr shaqeeyaan
Taageerada adeegyada kala duwan online iyo codsiyada
Calan of tuuryo gacanta fudud macmiilka
Soo dejisan Mailbird
Faallo ku saabsan Mailbird
Mailbird Xirfadaha la xiriira
Easy Mail Plus – softiweer waxaa loogu talagalay adiga inaad qorto xarfaha oo aad ugu dirto emayl ama fakis adoo awood u leh daabacaada baqshada iyo sumadaha.
Macmiilka email Popular shirkadda Microsoft. Software ka kooban yahay dhowr ah qalab waxtar leh oo kuu ogolaanaya in aad la xisaab badan shaqeeyaan.
IncrediMail – waa barnaamij loogu talagalay maareynta emaylka. Fursadaha balaaran ee loogu talagalay in lagu naqshadeeyo xarfaha iyo in la habeeyo softiweerka waxaa heli kara isticmaalaha.
Macmiilku waxa uu ka soo dejisan iyo wadaagaan faylasha torrent. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u astaysto dajinta ee files iyo u eegto macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan.
BitLord – waa aalad si loo soo dejiyo oo loo wadaago feylasha iyada oo la adeegsanayo kordhinta .torrent. Software-ka waxaa ku jira liistada faylasha warbaahinta ee caanka ah iyo mashiinka raadinta ee la socda.
qalab The functional waxaa loogu talagalay in la archives shaqeeyaan. software The taageertaa qaabab loo jecel yahay iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto watermarks ee ilaalinta copyright.
software The si uu u xaliyo daaqadaha xushay on top of daaqadaha kale. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u daawato ay muujinayso TV, filimada iyo warbaahinta video on top of daaqadaha bilaabay.